Dislọ ọgwụ Disposable Curtains, Curtains Disposable - Tianfeng
Suzhou Tianfeng Environmental Materials, guzosie ike na 2008, bụ a sara mbara enterprise
akwa-ulo ogwu enwere ike iwepu ahihia nwere ike ime nyocha na mmepe, imewe na mmeputa.
Ngwaahịa anyị gụnyere ákwà ngebichi a na-ekpofu ekpochapu, ákwà mgbochi na mbadamba akwụkwọ.
Disposable ọkọlọtọ ákwà mgbochi
ákwà mgbochi na-eme site na 100% polypropylene nke nwere otu n'ime mmetụta gburugburu ebe obibi kachasị dị ala nke ihe ọ bụla - sịntetik ma ọ bụ ntụgharị.
Anyị na-ekpuchi ákwà mgbochi anyị na-eme ka ụlọ ọgwụ na-edozi usoro nhicha na ọdịdị ha.
Disposable ákwà mgbochi nko
Suzhou Tianfeng Environmental Materials Technology, nke e guzobere na 2008, bụ ụlọ ọrụ zuru oke ọkachamara nke ụlọ ọgwụ nwere ike ịchọta ngwa ngwa nwere ike nyocha na mmepe, imepụta na imepụta ngwaahịa anyị gụnyere akwa akwa nwere ike iwepu, ákwà mgbochi na akwụkwọ ngebichi. Ha nile nwere nko na nkpuchi oku tinye.
Emere ákwà ngebichi ọhụụ a nwere ike iji dochie ákwà mgbochi ndị nwere ike iji ya wee wepu ya na nnukwu ọnụ ahịa ego yana njikwa njikwa ọrịa.
Anyị bụ ndị na-eduga irè ọrịa akara ọkachamara, mgbochi nje na ire ọkụ-retardant ọgwụ disposable ákwà mgbochi rụpụta.
13+ afọ 'ahụmahụ n'ichepụta disposable cubicle ákwà mgbochi
Egosipụtara iji zute ụkpụrụ mba ụwa nke nje na-egbochi nje na ire ọkụ
Ego dị oke ọnụ ahịa echekwara yana njikwa njikwa ọrịa ka mma
Independent mmepụta nje na akara mmepụta
Ejiri 100% polypropylene na-abụghị akwa akwa
Ndị Ọrụ Ahụike Nke COVID Na-alụ ọgụ maka Uru Akwụrụ
Ruo ugbu a, ndị ọrụ ahụ gosipụtara n'ụzọ doro anya na ha butere ọrịa na ọrụ ahụ. Mana steeti iri na isii na-atụle ugbu a itinye ibu ọrụ n'ụlọ ọgwụ: Mee ka ọ gosi na onye ọrụ ahụ enwetaghị ọrịa ahụ n'ọrụ. Otu n'ime ọtụtụ ihe na-eme ọrịa coronavirus 2019 (COVID-19) ...
EPA Greenlight Lysol Disinfectant Spray na-alụ ọgụ COVID-19
Lọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nchekwa Gburugburu Ebe obibi (EPA) kwadoro Lysol Disinfectant Spray iji lụsoo SARS-CoV-2 ọgụ, nje na-akpata ọrịa coronavirus 2019 (COVID-19). Lọ Ọrụ Nchekwa Gburugburu Ebe Obibi (EPA) akwadola ọgwụ Lysol Disinfectant Spray iji lụsoo SARS-CoV-2 ọgụ, nje na-ebute coronavirus ...
OVlọ Ọrụ Nọọsụ Nwere Ọzụzụ Nọgide Na-emebi emebi nye COVID-19
Enwere mkpa siri ike inye SNF ọtụtụ ihe, ọ bụghị naanị n'ihe gbasara akụrụngwa nchedo onwe onye, ​​kamakwa nnukwu ihe mgbochi ọrịa na ndị ọrụ. Kemgbe mmalite nke ọrịa SARS-CoV-2 / COVID-19 na United States, anyị amatala ngwangwa ...